गर्मीको अन्तिम महिनाको शुरुमा, चर्च क्याननको अनुसार, यो स्याट मक्रोइड, या मोक्खाडा को क्यापेडोकिया को स्मृति को श्रद्धांजलि गर्न को लागी प्रथात्मक छ जुन चौथो शताब्दी मा रह्यो। केटीले दुर्व्यवहारको एक रात राती र परमेश्वरको सेवा गर्न समर्पित गरे, उनको आमाले मठको निर्माणमा भाग लिनुभयो, जहाँ उनले पछि उनको सबै समय प्रार्थनामा बिताए। उहाँको सराहनाको लागि, यहोवाले चमत्कारको उपहारको साथ साहसलाई इनाम दिनुभयो, जुन उनले अरूको विश्वासलाई बलियो बनाउन प्रयोग गरे। उही व्यक्तिमा, अगस्त 1 मा Mokrida को स्मृति को विभिन्न संकेत संग सम्बन्धित छ। परम्परागत रूपमा, यो गर्मी र शरद ऋतुको कृषि कार्य र अफ-सिजन तिर सामान्य मोडको सीमा हो।
अगस्त 1 को लागि मौसम को लक्षण
रूसमा, छुट्टीमा प्राय: मार्केरा दिन भनिन्छ, किनभने त्यस दिन यो सामान्यतया सानो वर्षा थियो र यो शरद ऋतुमा राम्रो भयो। र यो एक राम्रो चिन्ह मानिएको थियो। यदि कुनै आंशिक थिएन भने, महिलाहरूले यसलाई प्रचार गर्न विशेष अनुष्ठान गरे। आवश्यक रुपमा 1 अगस्तमा जन्मेका सबैभन्दा सुन्दर केटीलाई चुनेका थिए वा यो महिना पनि त्यस्ता त्यस्ता उत्सवहरूमा लुगा लगाए र हातमा तातो कानहरू दिए। उनीहरूलाई नदीमा लिन र पानीमा उपहार छोड्न थाल्नुभयो, त्यसैले त्यो स्वर्गबाटै बित्यो। तर त्यो दिन वर्षाको उदार थियो भने अगस्तमा जन्मिएको केटी थ्रेसहोल्डबाट बाहिर नपुगेको थियो, किनभने विश्वासको अनुसार, वर्षा बढ्दै जानेछ र यसले बाढीको नेतृत्व गर्नेछ।
किसानहरूले मोरिनिनमा बरसातको मौसमको लागि पर्खिरहेका थिए, किनभने संकेतहरूले तिनीहरूले एक अमीर फसलको प्रतिज्ञा गरे। तर, यसबाहेक, गीला शरदलाई पूर्वनिर्मित गर्दछ। यदि अगस्त 1 मा मौसम स्पष्ट थियो भने - भूमि6थप हप्तासम्म हुनेछ। ध्यान दिए र अर्को:
यस दिनको ताराको बलियो हावा हो।
हावा पूर्व तिर बाट उभिन्छ - ठूलो तूफानको लागि पर्खनुहोस्;
मेंढक छिपाइएको छ - तातो दिन आउनेछ, र यदि चीट गायब भएको छ - तिनीहरू चर्काउने, मकवानहरू देख्ने छैनन् - यो ठुलो हुनेछ।
के म पहिलो अगस्तमा तैर्न सक्छु?
केही मानिसहरू 1 अगस्त र आइलीइन दिवसमा उलंग जुन2अगस्त मा मनाइएको छ। यही कारणले उनीहरूले विश्वास गरे कि तपाईं तैर्न सक्नुहुन्न। तर यो राष्ट्रिय परम्परामा कुनै निषेध छैन। मोक्रिडमा तपाईं तैर्न सक्नुहुन्छ, यदि यो उपयुक्त मौसम हो - तातो र शान्त।
अगस्ट 1 मा अन्य मानिसहरूको संकेत
यो विश्वास थियो कि मोक्लिनको दिन पछि सबै हिँड्ने कीराहरू सबै ग्याडफ्लिसको पहिलो हो। यदि अन्तिम गेटफ्लु घरमा उड्यो भने, यो परिवारबाट कसैको मृत्युलाई फर्काउन एक खराब बिषय थियो। यदि तपाईंले एस्पेक्सबाट ओपन गर्नुभयो भने, त्यसपछि यो मशरूमको लागि जंगल जान्छ, बोलेटस।
पहिले केटा किन सपना देखाउनुहुन्छ?
मौसमको जाडो चिन्ह
नर्सो पानीको बारेमा कस्तो सपना छ?
किन आगो लगाउँदा सपना?
कालो बिल्ली का बच्चा कस्तो देखिन्छ?
भविष्यको पति कसरी सपनामा देख्नुहुन्छ?
एक विमान उडान गर्ने सपना किन?
मधुमक्खी के जस्तो देखिन्छ?
किन साइकल चढाउने सपना?
व्हेल किन सपने?
तिम्रो कपाल काट्ने सपना किन?
ईस्टर को लागी रकम को लागी संकेत
किन आलु सपना देखाउनुहुन्छ?
लेडीबर्ड - संकेतहरू
बंदर मिया बीच
नेटवर्कमा कमेडी "द शैतान पर्दा प्रदा" बाट अज्ञात दृश्य देखा पर्यो
Aquarium प्राइमर छनौट र तयारीको एक महत्वपूर्ण नियम हो
सुकेको क्यालोरीमा कति कैलोरीहरू छन्?
कपडामा इटालियन शैली
फैशनेबल स्कर्ट - शरद ऋतु -2015 2016-2017
खुट्टामा नेल कवकको लागि लोक उपचार
Zephyranthes - गृह हेरविचार
शराब पछि हिचकी
घरको आधार समाप्त गर्दै
पर्खालहरूका लागि कालो र सेतो पर्खाल
कसरी माछा माछा
लिम्फडेनोपैथी - लक्षणहरू
विचलन - के हो, कारणहरू, चिन्हहरू, प्रकारहरू, कसरी लड्न र यसलाई पराजित गर्ने?
गर्भवती महिलाहरु को लागि तैरना
कोर्टनी कक्सले एक साथीलाई एक चकलेट संगीत ROCK4EB मा भेला गर्यो!
निकोल किडमैन र रिसे वेर्सपोन सीरीज को "बिग लिट लाइन्स" को दोस्रो सीजन मा खेल्नेछ।